Nguwuphi umahluko phakathi kweLophylised Powder kunye neeAmpoules? Yintoni imaski yomkhenkce omile? - lip | eye Cream| Vuvu sobuso |L Otion | Cream sobuso | Kubalulekile Oil OEM / ODM, Sales Ihowuliseyili
ekhaya » Nguwuphi umahluko phakathi kweLophylised Powder kunye neeAmpoules? Yintoni imaski yomkhenkce omile?
Nguwuphi umahluko phakathi kweLophylised Powder kunye neeAmpoules? Yintoni imaski yomkhenkce omile?
I-phyophilized powder kunye neapoules ziimpawu ezaziwayo zokhathalelo lolusu kule minyaka idlulileyo, kunye nokusebenza kokukhathalela ulusu ngokufanelekileyo kubonwe njengabachwephesha bokukhathalela ulusu. Ngaba i-lyophilised powder iyafana nee ampoules? Uyintoni umahluko phakathi kwabo? Ukwenziwa komgubo we-lyophilized yi-oligopeptide can,lungisa ulusu. Icandelo eliphambili lama-ampoules sisiseko,inokugcina ulusu lulutsha.Impembelelo enkulu yomgubo we-lyophilised kukukhuthaza imetabolism yeseli yesikhumba, nceda ukulungisa ulusu olonakalisiweyo kunye nokulibazisa ukuguga kolusu.
Umahluko phakathi kweLyophilized powder kunye neeapoules
Ukwenziwa komgubo we-lyophilised yi-oligopeptide, Umsebenzi ophambili kukulungisa ulusu; eyona nto iphambili kwi-ampoules sisiseko, esebenza ikakhulu ukugcina ulusu. Esona siphumo sikhulu se-lyophilized powder kukukhuthaza imetabolism yeeseli zolusu, nceda ukulungisa ulusu olonakalisiweyo kunye nokulibazisa ukuguga kolusu. Kodwa isiphumo se-ampoules silula, inokwenza mhlophe, anti-oxidation, kunye nokuthamba, kodwa ezi ziphumo azinakho ukubakho ngexesha elinye.
Umgubo we-lyophilised usetyenziselwa ukukhupha amanzi kwi-insulin ukuya kwisimo esomeleleyo kwindawo enobunzima, kwaye isiseko esidityanisiweyo senziwe umxube kwisiseko esomeleleyo. Ngele ndlela, umsebenzi wemveliso ungagcinwa ixesha elide, kwaye umgubo we-lyophilised unokusetyenziswa ngokuthe ngqo ngokusebenzisa i-element xa isetyenzisiwe.
IAmpoules zilulwelo kwaye zi-serum ephezulu yoxinaniso. Ukupakishwa kweAmpoule kukhethekile, ngokubanzi kuphela zizimbililitha ezimbalwa zebhotile yenaliti. Sele isetyenzisiwe emva kokuvula, ngaphandle koko kuya kuchaphazela ukusebenza. Umsebenzi wokulungiswa kwe-ampoule unamandla amakhulu, inganika ukondleka kwesikhumba ngexesha elifutshane, ukufezekisa inqanaba eliphezulu.
Esona siphumo sikhulu se-lyophilized powder kukukhuthaza imetabolism yeseli yesikhumba, nceda ukulungisa ulusu olonakalisiweyo kunye nokulibazisa ukuguga kolusu. Umsebenzi ophambili we-ampoule kukugcina ulusu kunye nokubonelela ngesondlo esifunekayo ngokukhawuleza. Zininzi iindidi ze-ampoule, njengokuqina kunye ne-ampoules, Ukunyibilikisa iapoules, anti-ukuguga ampoules, mhlophe ii-ampoules, njl. zahlukile.
Sonke siyayazi ukuba i-lyophilised powder iyimveliso yokhathalelo lwesikhumba esetyenzisiweyo emva kokuba ipoda kunye nesisombululo zidityanisiwe. Yeyiphi imaski yomkhenkce omile? Yintoni isiphumo somkhenkce omile okomileyo?
Misa imaski emile
Imaski yokuhombisa inesiphumo sokunyibilikisa okusebenzayo，ikwabizwa ngokuba yi-lyophilized powder mask, yiqhekeza-imasi eqinileyo yomasheya, ibhekisa kwifusion yesisombululo semaski, isikhuni, I-moisturizer kunye nezinye izinto ezenziwe ngendwangu yefilimu, usebenzisa ukomisa i-vacuum, ukuncitshiswa kwamanzi ukuze enze ifilimu eyomileyo yefom. Imaski yomkhenkce yomile ikulungele ngakumbi ukugcinwa kwezithako ezisebenzayo kwimaski kuneemaski ezimanzi zemveli.
Uyisebenzisa njani i-theophicized powder mask
Indlela yokusebenzisa imashlume yomgubo yecophophised iyafana nale yemaski eqhelekileyo. Emva kokucocwa, Susa imaski yomgubo ocekeceke ngqo ebusweni kwaye uyiyeke malunga 20 imizuzu. Ndithambise ngobunono into eseleyo kwaye ndiyisebenzise ezandleni, iinyawo okanye amanye amalungu omzimba. Emva kokubamba i-massage ye-element ebusweni, Hlamba ngamanzi kwaye ulandele amanyathelo okukhathalela ulusu.
I-Flyophilized powder mask yokusetyenziswa kwexesha
Ukusetyenziswa kokuqala kwemaski yephylophilized kungasetyenziswa ngokuqhubekayo iintsuku ezintathu, ilandelwe ngu 2-3 amaxesha evekini njengokudityaniswa. Imaski yomkhenkce eyomileyo inokuphakamisa ukuqina kwesikhumba. Emva kwenyanga okanye engaphaya, ulusu lunokugqiba umjikelo opheleleyo kwaye ubone umphumo ocacileyo.
Ukudityaniswa kunye nemaski yephylophilized
Umgubo we-lyophilised ungcono udityaniswe nemaski yokuhombisa. Umgubo we-lyophilized usetyenziswe njengemaski yokunyamekela, kunye nesisombululo somgubo we-lyophilized sisetyenziswa njengesixhobo. Imaski enomzimba yimveliso eyondlayo kakhulu engenakusetyenziswa yonke imihla, ukwenzela ukuphepha ingxaki yokukhutshelwa kolusu.
Iimveliso zenkampani zisekwe kuKhuseleko,ukulungiswa okungakumbi,Ukunyibilikisa ngakumbi ”ukulandela ubulunga kunye nesimo sengqondo esinoxanduva kumsebenzisi. Sisebenzisa izixhobo zakwangoko kwezendalo kuphando kunye nophuhliso lwetekhnoloji, Izinto ezingafunekiyo, ukubeka iliso kumgangatho, Isiphumo sokulungiswa kobuhle kunye neminye imiba yenkqubo yokukhangela yenkqubo ukuze kuphuculwe umxholo wobugcisa kunye nokulungiswa kobuhle.Wecome unxibelelane nathi.